Apple Music Hi-Fi inoenderana neDolby Atmos inosvika pasina muripo wekuwedzera | Ndinobva mac
Apple Music Hi-Fi inoenderana neDolby Atmos inosvika pasina muripo wekuwedzera
Toni Cortes | 18/05/2021 08:45 | Noticias
Kushamisika hakusi kusvika kwe Apple Music Hi-Fi. Pakanga paine makuhwa mazhinji uye zvinoratidza kuti Apple nyowani Yekutendeka yekutenderera mumhanzi sevhisi yaive pasi, pasina mubvunzo nezvazvo.
Asi zvinoshamisa kuti kuwedzera uku kwehunhu mhando yeApple Music kunouya Pasina mari yekuwedzera. Pamutengo mumwe chete, yakawanda yemhando yemodhiyo. NdiSpatial Audio uye Dolby Atmos. Kuuya kubva kuApple, chitsva.
Kutanga munaJune, iwe unozogona kuteerera kune zvese zvirimo muApple Music zvisati zvamboitika. Inzwi mukati Kuvimbika Kwakakwirira, Spatial Audio y Dolby Atmos. Zvese izvi nemutengo mumwe chete waunobhadhara parizvino. Pasina mari yekuwedzera.
Kuti ugone kukoshesa kuvandudzwa kwese kutsva, iwe uchazoda michina yekuteerera iri kune iro basa. Kutanga, iyo Apple Music application inofanirwa kumhanya pane iPhone 12, kana a Mac o iPad ichangopfuura. Aya majaira anokwanisa kududzira Spatial Audio uye Dolby Atmos.
Uye munzeve, mamwe mahedhifoni akanaka. Ivo vanofanirwa kuve nekwanisi yekuberekesa Hi-Fi odhiyo. Zvese AirPods y Beats neW1 uye H1 chip inotsigira Dolby Atmos. Kubva ikozvino zvichiita zvine musoro kushandisa mari paAirPods Max, pasina kupokana.
Uye izvi zvese zvinoenda kuburikidza neiyo itsva Bluetooth protocol ye Apple ALAC (Apple Yakasununguka Audio Codec). Ngatitii Apple's aptX. Iyo nyowani odhiyo codec yekuendesa Hi-Fi kurira zvisina waya
Iyi itsva Apple service inosvika kubva munaJune kune vese vanyoreri veMusic Music, pasina imwezve mari. Nhau huru, pasina kupokana.
Iyo yega yepazasi, kunze kwekunge uine mahedhifoni ari kumusoro kune basa, hapana mubvunzo nzvimbo yekuchengetera inogarwa neHi-Fi mimhanzi. Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda kutakura mimhanzi yakachengetwa pafoni yako, ziva kuti muKutendeka Kwepamusoro, nziyo dzako dzichadaro ichagara katatu zvakapetwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music Hi-Fi inoenderana neDolby Atmos inosvika pasina muripo wekuwedzera
Nyowani Apple LGBT tambo dzeApple Watch
Robert De Niro akakuvara pane seti yemuvhi Killers yeRuva Mwedzi